ယောက်ဖဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပက်သတ်ပြီး နီးစပ်လာပြီလို့ထင်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ကိုဇေသီဟ – Askstyle
ယောက်ဖဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပက်သတ်ပြီး နီးစပ်လာပြီလို့ထင်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ကိုဇေသီဟ
အကယ္ဒမီ နႏၵာလိႈင္ရဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ေမာင္ေလးျဖစ္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ ေမာင္ကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမ်ားစြာမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရိွပိုင္ဆိုင္နိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေမာင္က အနုပညာအလုပ္ေတြကို လံုးဝရပ္နားလိုက္ျပီး စီးပြားေရးနဲ့ ပညာေရးဘက္ကိုသာ အာရံုစိုက္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္တစ္ေယာက္ အနုပညာေလာကကေန အနားယူလိုက္ေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ ဒီေန့ဒီအခ်ိန္ထိ နာမည္ရရိွေနဆဲျဖစ္ျပီး သရုပ္ေဆာင္ ရီရီပြင့္ျဖဴနဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ အာရံုစိုက္ျခင္းခံေနရသူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန့မွာေတာ့ နႏၵာလိႈင္ရဲ့ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုေဇသီဟက ေယာက္ဖျဖစ္သူ သရုပ္ေဆာင္ ေမာင္ရဲ့ မဂၤလာသတင္းနဲ့ပက္သတ္ျပီး နီးစပ္လာျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို “စိန္ၿဖိဳးဆီက တခါမွ မၾကားဖူးတဲ့ စကား … ဒီေန႔ ၄ ႀကိမ္ေျပာတာ နားေထာင္လိုက္ရတယ္။ သူမဂၤလာေဆာင္ရင္ ဘယ္လို ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပဲ ေျပာေနတယ္…. နီးေနၿပီထင္ပါတယ္။” ဆိုျပီး ေမာင္နဲ့ ရီရီပြင့္ျဖဴကို ခ်စ္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဝမ္းသာစရာအေၾကာင္းအရာေလးကို မွ်ေဝေပးလာပါတယ္။
ေမာင္နဲ့ ရီရီပြင့္ျဖဴတို့ကေတာ့ ခ်စ္သူသက္တမ္း (၇) နွစ္တိုင္တိုင္ သစၥာရိွရိွေရႊလက္တြဲလာခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ျပီး နွစ္ဖက္မိဘေတြကလည္း သေဘာတူၾကည္ျဖဴေနၾကတာမုိ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း အျမန္ဆံုး လက္ထပ္ေစခ်င္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုေဇသီဟထင္ေနသလိုပဲ ေမာင့္ရဲ့ မဂၤလာသတင္းေလးကို အျမန္ဆံုးၾကားရပါေစလို့ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ Cele Connections ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မောင်လေးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် မောင်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မောင်က အနုပညာအလုပ်တွေကို လုံးဝရပ်နားလိုက်ပြီး စီးပွားရေးနဲ့ ပညာရေးဘက်ကိုသာ အာရုံစိုက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်တစ်ယောက် အနုပညာလောကကနေ အနားယူလိုက်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ နာမည်ရရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ရီရီပွင့်ဖြူနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဇေသီဟက ယောက်ဖဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် မောင်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပက်သတ်ပြီး နီးစပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကို “စိန်ဖြိုးဆီက တခါမှ မကြားဖူးတဲ့ စကား … ဒီနေ့ ၄ ကြိမ်ပြောတာ နားထောင်လိုက်ရတယ်။ သူမင်္ဂလာဆောင်ရင် ဘယ်လို ပြင်ဆင်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ ပြောနေတယ်…. နီးနေပြီထင်ပါတယ်။” ဆိုပြီး မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝမ်းသာစရာအကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။
မောင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ကတော့ ချစ်သူသက်တမ်း (၇) နှစ်တိုင်တိုင် သစ္စာရှိရှိရွှေလက်တွဲလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်း သဘောတူကြည်ဖြူနေကြတာမို့ ပရိသတ်တွေကလည်း အမြန်ဆုံး လက်ထပ်စေချင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇေသီဟထင်နေသလိုပဲ မောင့်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းလေးကို အမြန်ဆုံးကြားရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။